Fifampiarahabana tratry ny taona nataon’ny Kestora Voalohan’i Antenimierandoholona miaraka amin’ireo Ben’ny Tanàna sy ny Filohan’ny Mpanolotsaina Kaominaly avy amin’ny amin’ny Distrikan’ny Manjakandriana. – Sénat de Madagascar
Fifampiarahabana tratry ny taona nataon’ny Kestora Voalohan’i Antenimierandoholona miaraka amin’ireo Ben’ny Tanàna sy ny Filohan’ny Mpanolotsaina Kaominaly avy amin’ny amin’ny Distrikan’ny Manjakandriana.
February 1, 2019 Michel Hervey ANDRIANIRINA
Amin’ny maha-mpiahy ny Kaominina ao amin’ny Disitrika Manjakandriana ny Kestora Voalohan’ny Antenimierandoholona Mourad ABDIRASSOUL dia tonga niarahaba ny Loholon’i Madagasikara mivady nohon’ny fahatratrarana ny taona vaovao 2019 ireo Ben’ny Tanàna sy ny Filohan’ny mpanolo-tsaina Kaominaly avy ao amin’ny Distrika Manjakandriana ny Talata faha-29 Janoary 2019 tany Mantasoa.
Nararaotin’i Loholon’i Madagasikara Mourad ABDIRASSOUL tamin’io fotoana io koa ny tatitra momba ireo lalàna nivoka tao amin’ny Antenimirandoholona tamin’ny taona iny tamin’ireo ben’ny tanana sy ny Filohan’ny Mpanolontsaina ary Hatsangana ny fikambanan’ny Fiarahamonim-pirenena amin’ity taona ity izay afahana hampandroso haingana ny Kaominina sy hampandray andraikitra ny vahoaka.
Nambaran-dRamatoa RAVALORIAKA Robert Eva Ben’ny Tanànan’ny Manjakandriana sady Filohan’ny Fikambanan’ny Ben’ny Tanana eo amin’ny Distrikan’ny Manjakandriana fa vonona ireo Ben’ny Tanàna 25 ao Manjakandriana hanohy ny asa izay efa natomboka hatramin’izay ka hampandray andraikitra hatrany ny vahoaka ao aminy.
Nisaotra sy nankasitraka ireo vahiny nasaina ny Kestora Voalohany Mourad ABDIRASSOUL ka nametraka mazava ny fitohizan ‘ny asa ary tanjona dia ny fitondràna tsara tantana ahitàna ny fandraisan’ny vahoaka ao amin’ny faritra iadidiany anjara amin’ny fampandrosoana ara-ekonomika, sosialy ary koltoraly amin’ity taona ity.